Yaman: Kiisaska Daacuunka oo sannadka gudihiisa gaari kara 1 malyuun – Kasmo Newspaper
Yaman: Kiisaska Daacuunka oo sannadka gudihiisa gaari kara 1 malyuun
Updated - September 29, 2017 2:29 pm GMT
London (Kasmo), Tirada dadka xanuunka daacuunku soo ridanayo dalka Yaman waxay sannadka dhammaadkiisa gaari kartaa ilaa 1 malyuun oo qofood, didaasna waxaa sheegaysa qaylodhaanta Ururka ICRC ee Laanqayrta Cas.
Andere Faite, madaxa Hay’addaas ee Yaman oo maanta oo Jimce ah ka hadlay Geneva ayaa sheegay in tirada kiisaska ilaa hadda la hayo garayso 750,000, dadka u geeriyoodayna marayaan 2,119 qofood.
“Waa mashaqadii ugu xumayd oo caafimaad oo casrigaan ka dhacda xanuun si caadi ah loo daweyn karo” ayuu yiri mas’uulka oo warbixintiisa sii wada.
In xaaladda dalkaas oo 2 sano duqaymo ka socdaan ka sii darayso hore ayay Ururrada Samafalka Caalamiga ah, bilhihii la soo dhaafay uga sii deyrinayeen, dagaalladu waxay burburiyeen hannaankii nadaafadda iyo biyaha dalka.
In ka badan kala bar goobihii caafimaadka waxay gabeen shaqooyinkii, waxaa sii faafaya daacuunka, qiyaastii dad gaaraya 15 malyuun ma haystaan biyao nadiif ah; kororka nafaqa-darraduna wuxuu si gaar ah uga dhigay kuwo nugul carruurta oo ah tirada dhibbanayaasha ugu badan.
Daacuunku waa xanuun si caadi ah loo daweyn karo, wuxuuse u baahanyahay wax ka-qabasho degdeg ah, taas oo hadda dalka Yama naan ka suuragli Karin.